आइतवार सबैभन्दा बढी दुर्घटना ! – Peacepokhara.com
आइतवार सबैभन्दा बढी दुर्घटना !
गोकुल बानियाँ, पोखरा ३ जेठ । दुर्घटना कुनै निश्चित समय र स्थान तोकेर हुदैन । दुर्घटना कहाँ कतिबेला हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । तरपनि अहिलेसम्मका दुर्घटनाको कारण, प्रकृति र समयको आधारमा प्रहरीले सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने वार र समय सार्वजनिक गरेको छ ।
पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका अनुसार यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना आईतवार भएका छन् । प्रहरी नायब महानिरिक्षक कमलसिंह बमका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्म भएका ६१० दुर्घटना मध्य सबैभन्दा बढी आईतवार भएका छन् । वारको आधारमा सवारी दुर्घटना मुल्याङ्कन गर्दा आईतवार भएका दुर्घटनाको संख्या १०३ छ । त्यसपछि मंगलवार ९४, शनिवार र सोमवार ९३/९३ तथा शुक्रवार ८१ , विहिवार र बुधवार ७३/७३ सवारी दुर्घटना भएका छन् ।
त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा आएको दुर्घटनालाई समयको आधारमा विष्लेशण गर्दा मध्यान्ह १२ देखि साझ ६ बजेको बिचमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएका छन् । कुल ६१० दुर्घटनालाई आधार मान्दा यो समयमा २२८ दुर्घटना भएका छन् । साझ ६ देखि राती १२ बजेको विचमा २०३, विहान ६ देखि मध्यान्ह १२ बजे सम्ममा १४६ र राती १२ देखि विहान ६ बजेको विचमा सबैभन्दा कम ३३ दुर्घटना भएका छन् ।
पश्चिमाञ्चलमा पछिल्लो तीन बर्षको दुर्घटना तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु आर्थिक बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा १६.९८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यो आर्थिक बर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १४.६५ प्रतिशत बढेको छ । यो क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा सवारी दुर्घटनामा परेर ५०२ जनाले ज्यान गुमाएकोमा गत आर्थिक बर्ष ७१/७२ मा ४५६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्ममा ३९२ जनाले ज्यान गुमाएको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा पर्ने सवारीमा मोटरसाईकल सबैभन्दा बढी छन् । कुल दुर्घटनामा संलग्न सवारी मध्य ३८ प्रतिशत मोटरसाईकल रहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालकको लपरवाहीले सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिलेसम्मको दुर्घटनालाई आधार मान्दा ५० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीको कारण भएको छ । त्यसपछि ३१ प्रतिशत दुर्घटना तिब्र गतिको कारण भएका छन् ।
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा जगतलाई अग्रता
काठमाडौंको नेपालटारमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने कारखाना